तिथि मेरो पत्रु » तपाईं एक नक्कली अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल हाजिर गर्न सक्छन् कसरी?
तपाईं एक नक्कली अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल हाजिर गर्न सक्छन् कसरी?
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जुन. 30 2020 |3मिनेट पढ्न
“तपाईं कसरी प्रोफाइल तपाईं अनलाइन डेटिङ साइट सामेल प्राप्त गर्न बनेको वास्तविक र छैन केहि लागि हो भनेर थाहा छ? म यो सामेल हुने त म एक डेटिङ साइट देखि इमेल धेरै प्राप्त हुनेछ, र त्यसपछि इमेल बस रोक. कि के भर्?”
अनलाइन डेटिङ ठगी जोगिन, आफ्नो सबै भन्दा राम्रो शर्त केहि वर्ष को लागि नजिकै भएको छ कि प्रमुख अनलाइन डेटिङ साइटहरूमा संग रहन र एक ठूलो सदस्य आधार हो. तिनीहरूले यसलाई स्वीकार छैन, तर म व्यक्तिगत साना वा बढी अस्पष्ट डेटिङ साइटहरूमा 'प्याड केही देखेको छु’ नक्कली प्रोफाइल भएका वेबसाइट र पनि यो 'नक्कली देखि आफ्नो सदस्यहरूलाई एक सन्देश पठाउन हदसम्म जाने’ साइट थप गतिविधि सृजन को आशा मा व्यक्ति.
बडा, अधिक राम्रो तरिकाले ज्ञात डेटिङ साइटहरूमा यस गर्न कुनै कारण छैन र सामान्यतया कर्मचारीहरु जसको काम नयाँ खाता र निराना बाहिर spammers र scammers निगरानी गर्न छ छ. बडा साइटहरु पनि जोगाउन सार्वजनिक छवि छ, जो आफ्नो पक्षमा काम गर्दछ. तपाईं एक spammer वा scammer हुनुको कुनै शङ्का भने, तपाईं वेबसाइट सहयोग टीम तुरुन्तै तिनीहरूलाई रिपोर्ट कि सुनिश्चित.
किन सन्देश तपाईं सामेल पछि बन्द गर्छन्?
त्यहाँ एक वास्तविक व्यक्ति आफ्नो सन्देश जवाफ सक्छ कि कारण सबै प्रकारका छन् र तिनीहरूलाई थुप्रै व्यक्तिगत तपाईं संग गर्न केही छैन. शायद उनि साँच्चै व्यस्त मिल्यो, छुट्टी मा छोडेर शहर, वा अनलाइन डेटिङ सिर्फ आफ्नो कुरा छैन भन्ने निर्णय. यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा निरुत्साहित गर्न छैन. समुद्रमा अधिक माछा धेरै छन्.
म पुरा परित्याग गर्न निर्णय अघि केही हप्ता को पाठ्यक्रम मा केही सन्देश पठाउन प्रयास सिफारिश गर्नेछन्. अनि त, तपाईं अझै पनि केही यहीं छैन भने, मा कदम.
व्यक्ति तपाईं जो पनि कारण तपाईं सम्पर्क गर्ने प्रयास एक scammer हुन सक्छ Messaging जहाँ अवस्थामा छन्. ती विवरणहरू अक्सर पाइन्छ र प्रमुख डेटिङ साइटहरूमा चाँडै समाप्त गर्दै. तपाईं प्रतिक्रिया समय त्यसैले, खाता मेटिएको हुन सक्छ.
तपाईं पनि वास्तवमा भन्ने साइट को एक तिर्ने सदस्य छैन जो एक केटी देखि एक संकेत प्राप्त हुन सक्छ. तपाईं सन्देश सामेल भने उनको उनले paysÖ नभएसम्म प्रतिक्रिया सक्षम नहुन सक्छ र त्यो त्यसो गर्न इच्छुक नहुन सक्छ. त्यो तिर्न तयार छैन भने तपाईं कुरा गर्न, त्यसपछि जसरी आफ्नो समय को लायक छैन. आफ्नो सूची मा अर्को प्यारा केटीलाई मा सार्नुहोस्.
लाल झण्डा. तपाईं scammers देखि असली मान्छे कसरी जान्न सक्छन्?
“लाल झण्डा” नक्कली हुन सक्छ प्रोफाइल सङ्केत तपाईं एक व्यक्तिको प्रोफाइल मा खोज्न सक्छौं कि ती साना कुराहरू रूपमा परिभाषित गर्दै. निश्चित जान्न कुनै तरिका साँच्चै छ तापनि एक प्रोफाइल वास्तविक वा नक्कली हो भने, केही रातो झण्डा तपाईं को लागि बाहिर घडी गर्नुपर्छ भनेर छन्.
यहाँ म भन्न जब म के मतलब केही उदाहरण हुन् “रातो झण्डा”.
– व्यक्ति फरक वेबसाइट मा तिनलाई बाहिर जाँच गर्न निम्तो. यो अझै पनि एक वास्तविक प्रोफाइल हुन सक्छ, तर यो पनि एक अश्लील साइट साइन अप गर्न निमन्त्रणा हुन सक्छ.
– एक महिला भने तपाईं कहिल्यै भेट गरेका छन्, एकदमै अगाडी र खिलवाड को आदी छ कि एक सन्देश पठाउने, त्यो सिर्फ एक अश्लील मोडेल वा ढाँचा केटीले साइट तपाईं आकर्षित गर्न कठिन हुन सक्छ, वा एक वेश्या ग्राहकहरु प्राप्त गर्न प्रयास.
– एक साँच्चै ठूलो देख मान्छे वा केटी (हामी सुपर मोडेल गुणस्तर कुरा गरिरहनुभएको) के तपाईं पनि एक तस्बिर अपलोड वा आफ्नो प्रोफाइल भरिएको छैन तापनि एक सन्देश पठाउने.
– प्रोफाइल मा व्याकरण धेरै गरिब गुणवत्ता को छ र विदेशी सुनिन्छ. एक spammers धेरै छन्, अक्सर रूस र नाइजेरिया देखि (र अन्य धेरै ठाउँमा), कि विशेष डेटिङ साइट र अन्य सामाजिक नेटवर्क साइटहरु लक्षित, माइस्पेस र Friendster जस्ता.
– एक व्यक्तिले फोन नम्बर रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी अनुरोध, ठेगाना, व्यक्तिगत वा वित्तीय जानकारी को कुनै पनि अन्य प्रकार वा, तिनीहरूले बस पहिचान चोरी वा अन्य कुनै धोखाधडी घोटाला लागि प्रयोग गर्न जानकारी सङ्कलन गर्न डेटिङ साइट प्रयोग गर्न सकिन्छ.
– कुनै पनि कारण भने, व्यक्ति वा सन्देश 'राम्रो साँचो हुन' देखिन्छ, यस तपाईं होसियार हुन आग्रह गर्नुपर्छ.
म यी मापदण्ड पूरा सन्देशहरू प्रतिक्रिया कहिल्यै गर्नुपर्छ भन्ने होइन छु, तर यदि तपाईं के, सावधानी संग अगाडी बढन!
तपाईं केवल साधारण अर्थमा प्रयोग भने तपाईं असल बन्नेछु. सम्झना, अनलाइन वा छैन, वास्तविक संसार नियम अझै लागू.